I-Lion Men inegunya lokuziqhenya kanye nokuziqhenya, okubenza bangabekezeleli ukucindezela nokucindezela. Amadoda azalwa ngaphansi kwalesi sibonakaliso ayahlukaniswa ngobuningi nokuphana. Bahloniphekile, baziqhenyayo, ngezinye izikhathi baziqhenyayo futhi bayaziqhenya. Amandla abo angaphakathi akhulu kakhulu kangangokuba angakwazi ukuphula noma ubani. Futhi ngokwenza lokhu, ngeke bazizwe benecala. Ukuphila kweLviv kuvame ukugcwala injabulo. Uma owesifazane efuna ukunqoba lesi "sidalwa", khona-ke udinga ukwazi ukuheha ukunakwa kweS Lion.
Endabeni lapho i-Lion Man ihlula izitha, khona-ke ukupha kwakhe kungasebenza. Ngokuvamile kunalokho, izingonyama zibekezelela labo abangenalo amandla afana nawo. Futhi abantu abaningi abazalwa ngesibonakaliso se-Zodiac Leo, ngokuvamile bahlinzeka usizo, ngenkathi bengalindeli lutho ngokubuyisela, kodwa ngiyabonga kuphela. Banezinamandla ezinjalo futhi banethemba lokuthi konke okuzungezile kukhanya futhi kudonsela inani elikhulu labalandeli enkosini yezimpawu zezinkanyezi. Ingxenye ephoqelekile yokuphila kweNgonyama yilokho okushiwo khona.
Into ebalulekile ebuhlotsheni bukaLeon ukwazi ukuthi oshade naye othandekayo uyimoto efanelekile futhi ingokwakhe kuphela. Lokhu akuthinti ukwethembeka kuphela, kodwa futhi kubheka: owesifazane kufanele akhonze umyeni wakhe othandekayo we-Leo, ngaso sonke isikhathi asekele ohlangothini lwakhe futhi kufanele ngaso sonke isikhathi abe impendulo yombuzo lapho ekhona nokuthi yiziphi imicabango ekhanda lakhe. Lapho ingonyama ithola zonke lezi zibonakaliso, iqinisekisa ukuzinikela nothando, iphinda ibe yindoda enakekelayo neyindoda ekulungele ukuguqula owesifazane othandekayo ube ipharadesi nsuku zonke.
Amadoda ayenelungelo lokuzalwa ngaphansi kwesibonakaliso sezingonyama adinga owesifazane ozolingana nezimfanelo ezingokomoya ezibonakalayo nezizimele. Kumelwe akwazi ukuhlela ikhaya futhi ngesikhathi esifanayo ayakwazisa futhi athande ubuciko, ngoba oshade naye-i-Tsar akanalo isikhathi sezinto ezincane ezifana nokukhathalela indlela yokuphila.
Zonke izingonyama izibonakaliso ze-zodiac zobukhosi kakhulu, zidinga abazithokozi kanye nokuhamba ngezinyawo. Uma unomuzwa wokuthi awungakulungeli ukuba omunye wabantu bakhe, noma awufuni ukuchitha isikhathi nomzamo wokudala isiteji, khona-ke kuyoba ngcono uma uphambukela - awukwazi ukubhekana nalesi sidalwa.
Awusabi ubunzima? Kulesi simo, ungaqala ukutadisha imiyalo yokuheha ukunqunywa kweS Lion. Futhi ngolwazi lokuthi izingonyama azikwazi ukumelana nokuzithoba nokunethezeka, ngeke kube nzima ukwenza. Amadoda-Amabhubesi angaphuthelwa abesifazane abazethembayo nabaqhakazile abadlulile. Ngisho noma unesoka, uLeo ngeke akwazi ukuyeka, ngoba ukuqiniseka kwakhe ukuthi konke okusemandleni kungokwakhe, akunakuguquka.
Uma ufanelwe ukuvela ngaphambi kweNdlovukazi yaseLviv futhi ngesikhathi esifanayo uveza isivumelwano esiphelele futhi ulungele ukuqaphela ubukhulu bakhe, ungaqiniseka ukuthi lesi silo singokwakho.
Ufuna ukwazi indlela elula yokuheha iNduna eyindoda? Konke kulula kakhulu. Menze abe yisikhumbuzo se-opaque ukuthi usukulungele ukunqotshwa. Bheka le ndoda enomdlandla, qiniseka ukuthi ubonisa isithakazelo ezindabeni zakhe, ukusekela kunoma yiziphi izinyathelo zakhe. Owesifazane olungele ukuqothula eNkulwaneni yesilisa, uzodumisa.
Yiziphi izindlela zokunqoba i-Lion yesilisa ngosuku?
Labo abacabanga ukuwina iNgonyama, kubalulekile ukubheka okufanelekile. Kufanele kube nokuphelela ekubukeni. Uma ufika osukwini neNkosi, khetha kahle ingubo noma izingubo, ukuze ukwazi ukubonakala ngokucacile kusuka kude, ngenkathi efomini lakho kwakukhona ubulili kanye nobuhle ngesikhathi esifanayo. Cishe, owesilisa namuhla uzokhetha indawo enhle yosuku, futhi akufanele ukhohlwe ukutusa ukukhetha kwakhe, okubonisa ukuthi uyindoda ehlanjululwe futhi ephanayo, futhi kuphela ongakwazi ukuhlangabezana nokuhleleka okunjalo okumangalisayo. Ungesabi ukwedlula ukuzithoba - nakakhulu, kungcono.
Uma ucabanga ngokulondoloza iS Lion, ingabe uyilungele ukuba njalo futhi kukho konke kuqala? Kulokho, kuzodingeka ugijimise ukuhamba ngezinyawo, umvuzo wakhe, ngaso sonke isikhathi. Uma ulungele lokhu, khona-ke indoda enjalo izokuzibamba eduze kwakho. Akukho mqondo wokugqithiswa kwemibono yothando kula madoda, noma kunjalo, nakwabesifazane, futhi. Ungakhuluma usuku lonke ngothando lwakho nokuthandana kwezingonyama, futhi lokhu kuzoba yi-balm enhle kunazo zonke emphefumulweni wabo wobukhosi.
Indoda enobudlova ingumkhawulo wamaphupho noma ubusuku obubi?
Isibonakaliso sesine sokulungela komuntu ukushada
Izinhlobo ezingu-10 zamadoda, okufanelekile ukuhlala kuzo
Amadoda amahle kunabo bonke emhlabeni
Indlela yokuwa ngothando nomyeni wakho
Jamu kusuka ku-acacia
Umculi u-Beyonce ubuyela ngokushesha esimweni esihle: inkanyezi yokuqeqeshwa kwezemidlalo
Umsebenzi "Anti-Zhir": imithetho emine yobuhle bekhanda lesikhumba
Izitshalo ezingaphandle: i-cataract
Izimpawu ukuthi le ndoda izobuya kuwe
Funda isiNgisi wena ngokwakho
Azu kule multivariate
I-Horoscope ngo-September 2017 yabesifazane-iLibra
Indlela yokuphambanisa izinyawo zakho ekhaya